Muuri News Network » Daawo Sawirada: ”Boqortooyada UK oo lagu heesto Dheyman ay ka qaateen Dalka India.
Daawo Sawirada: ”Boqortooyada UK oo lagu heesto Dheyman ay ka qaateen Dalka India.
Boqortooyada UK ayaa mar kale laga dalbaday in ay dib usoo celiso Dheyman qaali ah ay ka qaateen dalka India xiligii ay dalkaasi gumeesanayeen Ciidamada Ingiriiska.
Dad u dhashay Dalka India ay ku jiraan ganacsato waaweyn, Shaqsiyaad caan ka ah dalkaasi iyo qaar kamid ah Jilayaasha waa weyn ee Filimada India ee (Bollywood), ayaa dacwad waxa ay kusoo oogeen Boqortooyada UK.
Dheymanka ay Boqortooyada Ingiriiska ka qaadatay dalka India ayaa lagu magacabaaa [Koh-i-Noor] ama (Buurtii Iftiinka), waxaana dheymantan lagu qiimeeyaa lacag dhan 140 milyan oo dollar Mareykanka.
Boqortooyada UK ayaa Dheymantan ka qaaday Dalka India xiligii ay gumeesanayeen, waxa uuna Dheymankan hada kamid yahay hantida Qoyska Boqortooyada ee wali ka dhax muuqda aqalka Boqortooyada.
Dheymankan lagu heesto Boqortooyada UK ayaa waxaa soo xiratay Boqorada UK xiligii ay kursigaasi la wareegeysay , waxaana Boqorada laga codsaday in Dheymankaasi ay dib ugu soo celio Dalka India inkastoo Boqortooyada ay dalabkaasi kahor timid ayna diiday in dib loo celiyo dheymankaasi.
Qareeno matalaya Muwaadiniinta India ayaa dacwad ka dhan ah dheymanka ay Boqortooyada ka qaadatay India ka bilaabay Magaalada London, Qareenada ayaa dacwadooda ku saleeyey sharciga loo yaqaan Holocaust Law kaasi oo lasoo saaray dagaalka labaad ee Adduunka kadib ayaa qeexaya sida dowladaha ama Wadamada dhaca Qaran geysta loola xisaabtamo.